Izesekeli obomvu ingubo: incazelo, izithombe
Lapho edala isithombe izesekeli bafeza indima ebaluleke kakhulu. Isitayela nesambatho Chic ukugcizelela ngokunembile imininingwane. Ikakhulukazi izesekeli elikhanyayo futhi zihlukahlukene, ungakwazi ukugcizelela ingubo ebomvu. Lokhu umbala kuyisimo Classic. Nokho, lokhu ingubo umbala linezincazelo ezingaphezu kwamashumi amahlanu ukuze zonke ntombazane iyakwazi ithoni evumelana engcono sibalo uhlobo yakho, ibala lesikhumba nezinwele. Yini izesekeli ezifaneleke ingubo ebomvu?
izimiso umbala ofanayo
Nge obomvu ukuhlanganisa kahle abamnyama, abamhlophe, grey, igolide nesiliva. Ngesisekelo onjani isithombe uthela ngubo ifaniswe inhlanganisela. izesekeli Black ukunikeza isithombe obomvu sexy nokuzimisela. Le nhlanganisela uhlale umxhwele kakhulu. Alulaze obomvu ingubo izesekeli nombala omhlophe, unganikeza isithombe obugagu kanye Ukwanelisa inkanuko, futhi i Ensemble enjalo awunankinga okwesibhakabhaka. Izicathulo kanye esikhwameni idube uyonikwa fashionista intombazane futhi ubuntu yasekuqaleni.
Mpunga Calm kahle elibomvu, ikakhulukazi uma izinto zenziwa elinama ehlukile noma abe ukuthungwa ehlukene. Mpunga ngeke kuvimbele enamandla umyalezo abomvu. Igolide nesiliva ukwakheka Reds bazenze ekhethekile nangobuciko. Ngokuvamile, inhlanganisela enjalo asetshenziswa ukukhethwa izisekeli noma ubunikazi amaqembu.
Cishe wonke umuntu wesifazane kuleli kwekilasi kukhona ingubo ebomvu. Yini izesekeli kuyofika kuye? Okuningi kuxhomeke ekutheni isitayela ingubo. Isesekeli yokuthunga ingubo ebomvu zingakhiqiza hhayi kuphela esikhwameni. Izicathulo, amagilavu kanye nezigqoko futhi ungakwazi ukugcizelela isitayela isithombe esikhethiwe. Inhlangano yokuqala nge red - kungcono abanothando. I ingoma ingubo kungakusiza ngokuhamba eminye imibala, kuye izesekeli.
I-Concise dress elula cut kungenziwa igqoke kuphi, ukuyishintsha ngale ukuqashelwa. Ukuya ephathini, ungakwazi ukwengeza ukugqama, enezela ngayo patent lesikhumba izicathulo, namasongo besiyoba sikhulu futhi kube namacici ophuzi. Lapho ihlela ukuba kube ukugqoka lokhu ingubo emhlanganweni, ungasebenzisa ibhande, izicathulo kanye esikhwameni grey noma amnyama. Imihlobiso kuleli cala, kahle ukukhetha isitayela ongaphakeme-key.
Sigqoka ne flying izinhlobo izindwangu obucayi, angenisa ukukhanya akufanele accessorize ngezinto esindayo. Ifomu zonke izingxenye kufanele babanjwa. Ngokwesibonelo, ukukhanyisa kusukela obomvu chiffon sundress ezinhle umphelelisi emhlophe ballet emaxhaphozini a nesikhwama esincane. Ubucwebe ungakwazi ukugqoka pearl namacici nentambo. ingubo Trendy eziyinkimbinkimbi usike lihambisana Suede izicathulo grey futhi bamba kungenziwa kulekelelwa amagilavu kufushane kakhulu.
Yikuphi ukulingana izesekeli ingubo ebomvu? Izithombe esihlokweni asibonise ezihlukahlukene ongakhetha. Konke kuncike izimo. Futhi indaba ukunambitheka ngayinye ubulili fair.
Amaphuzu ungakwazi ukugcizelela owesifazane businesslike. Attractive kungenzeka isithombe sentombazane ingubo ebomvu ebukhoneni amaphuzu ngendlela izibuko ezimnyama-Kwakwakhiwa nokukhanya. Ayikho ngaphansi amahle sibheke le ngubo izibuko esimweni ukukhanya ngezibuko ezinemibala. Ukuze ingubo ebomvu kangcono omnyama nomhlophe kuhlangene obomvu noma umbala beige. Ngokuvamile, ukudalwa isithombe - into kumuntu nomuntu, kanti angakwazi sihlanganise ingubo yakhe imibala ehlukene. Umugqa phakathi imfashini Eclecticism kunganambitheki mncane kakhulu. Ngakho musa hang kakhulu ku ezihlukahlukene izesekeli ingubo ebomvu ukuthi kuxoshwe abantu kuphela bemi eduze.
I oyisisekelo ekukhetheni imigexo ubhekwa inombolo nombala. okuningi ngokweqile ubucwebe ubukeka kunganambitheki. Inhlanganisela ngezinto ezahlukene akwamukeleki. Uma intombazane igqoka amacici egolide, isongo, futhi badinga kuphela igolide. Akwamukelekile ukugqoka namacici imigexo bewumsebenzi nensimbi noma isongo lokhuni. Zonke imihlobiso akhethiwe kusuka ukwaziswa okufanayo futhi kufanele zifaneleke umbala kanye nesitayela.
Imibala imigexo linendima ebalulekile indaba kusuka kulo yakhiwa. Ngokwesibonelo, ukuthatha black. Sika amatshe e black izokwengeza ndawonye ukujula isicwebezelisi, kuyilapho metal noma plastic uyonika okukhulu mkhulu. Pearl uyonika red egudle obugagu kanye ukuzibamba, futhi ubuhlalu ezivamile emhlophe - malula futsi kalula. Phela, lo amapharele kungaba kokubili elimhlophe kanye grey, umnqumo, omnyama, cranberry. Zonke lezi imibala Senziwe nacre pearl kungenzeka kuhlangene ingubo ebomvu. igolide ongaguquki kungenzeka umhlobiso best of the ingubo ebomvu. Igolide indandatho kungenzeka elinongwengwezi lwezilwanyana ngetshe elibomvu noma emnyama. Lasesihlakaleni ukucindezeleka namasongo khulula noma igolide iwashi. Uma iringi iyona itshe, itshe elifanayo kuyakuba namacici.
Indlela ukukhetha izesekeli ilungelo ingubo ebomvu? Izithombe esihlokweni lingakusiza choice, ukusekela umbono ezithakazelisayo. Uzizamele indlela - futhi ngeke sihle.
Yini umuntu angaqhubeka izesekeli ingubo ebomvu? Lokhu kungaba isigqoko, futhi yebo, isikhwama semali. Ngaphandle kwayo, intombazane akuwenzanga endlini. Isikhwama - kuyinto accessory eyinhloko abesifazane. Kungcono ukukhetha esikhwameni ukuze ingubo ethile hhayi kuphela ngombala kodwa futhi ngesitayela. Beautiful ingubo enakho emaphaketheni ngisho kusikisela ukuthi ngeke sukela lutho. Khetha esikhwameni ngoba izingubo ezibomvu kudingeka sigxile isitayela isithombe ethoyilethi. imodeli Okuvamile kungaba emnyama noma emhlophe. Ngokuba ukuphila kwansuku zonke, ungakwazi ukuthenga esikhwameni design ezivamile.
Uma phezu ingubo lady ihlele ukugqoka ijazi ka lowehlukile, ungakhetha elibomvu esikhwameni. Igolide nesiliva amvikele - kungcono nje imisebenzi uhlobo wokuziphilisa.
Izigqoko - miniature kanye ezinkulu - kufanele zifane umbala izicathulo. Ukuze ehlobo igqoka zibomvu isigqoko ingaba mhlophe futhi beige, ehlotshiswe umdweshu nembali. Small cap black wazimboza senzelwe igqoka kufaneleka futhi ukubukeka isifazane.
kusihlwa Red ingubo - kuba njalo Chic nenhle. izingubo ezinjalo kwabesifazane ngokuvamile akuveli ne ihhashi abayizimpumputhe. Yingakho kubaluleke kakhulu ukukhetha izesekeli ilungelo ebomvu dress kusihlwa. Ngokukhethekile kufanele ikhokhwe ubucwebe. Kulokhu, nongebonwe umgexo enhle ezicashile zamatshe amhlophe namacici eyenziwe nesitayela esifanako. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-umkhankaso ku-reception wokuziphilisa kwakudingeka Chic sesithende esiphezulu izicathulo, amagilavu kanye esikhwameni. Lezi sekeli kufanele zifane umbala bese umphelelisi nomunye. Uma isihlangu ivuliwe, Kungcono kakhulu isiliva negolide. Uma izicathulo, kungcono ukuba anqikaze zakudala, emhlophe, umbala nezicathulo ezimnyama uphelele isitayela ezahlukene zokugqoka.
Thola izesekeli ilungelo ingubo ebomvu, ungenza isithombe njengabesifazane kanye ezikhangayo.
Through the kuhlwa nokukhanya: ophahleni izibani Fluorescent
Indlela ukupheka izidakamizwa "Regidron" ekhaya
Ukulondoloza ku "uLizwi": MS Word 2007 ezintsha izinguqulo
Cabanga kwesihenqo intambo kule ingaphakathi
Monomers amaprotheni yizo umsuka ubalulekile? Yiziphi monomers amaprotheni?
"Creed Assassin: Unity": nezidingo zomshini kokukhululwa date